Iskaa U Noqoshada – Iskaa U Noqoshada
Iskaa U Noqoshada La Caawinaayo
Nidaamka iskaa u noqshada waxaa loola jeedaa, marka qofka ajnabiga ah ee codsanaaya badbaadada caalamiga ah, kaasoo aan joogi karin ama aan doonaynin waddanka qaabilay, uu si iskiis ah dib ugu laabanaayo halkii uu ka yimid ama dalkiisii hooyo, amaba dalkii kale ee uu ku leeyahay sharciga deganaanshaha. Had iyo goor iskaa u noqoshada aan marka ugu horraysa waxaa loo soo bandhigaa qofka loo diiday in la siiyo sharciga deganaanshaha, ama aan soo buuxin shuruudihii uu magangalyada uga heli lahaa dalka uu joogo.
Iskaa u noqoshada waa qaab qiimeyn bani’aadnimo oo xushamad leh oo qofku uu dib ugu laabanaayo dalkiisii hooyo, ama uu nolosha mar kale dib ugula qabsanaayo halkaas. Qof dib u laabtaha ah isaga ayaa gaaraya go’aanka dib u noqoshadiisa, waxaana uu markaas kala xaajoonayaa hay’adhaha arrinkaas ku shaqada leh, waqtiga ugu haboon ee dib u laabashadiisa. Go’aanka iskaa u noqoshada markii la doono ayaa dib looga noqon karaa oo la baajin karaa, xitaa marka garoonka la joogo, kahor inta aanay diyaaradu kicin.
Qofka dib u laabtaha ah ee aan wax hanti ah haysan, waxaa la siin karaa caawimaadda dib u laabshada ah, taasoo loola jeeedo caawimaadda iskaa u noqoshada. Tigidka diyaaradda ka sokoow, dib u laabtuhu waxaa uu helayaa lacag kaash ama caddaan ah, ama waxaa la siiyanayaa caawimaad waxtar kale ah oo aan lacag ahayn (hyödyketukea), taasoo uu isku dabarri karo bilowga hore ee marka uu dalkiisa ku laabto. Waxaana arrinkaas lagu magacaabaa dib ula qabsashada labaad. Magaca caalamiga ah ee loo yaqaan caawimaaddaas iskaa u noqoshada iyo dib ula qabsashada labaad waa: Assisted Voluntary Return and Reintegration, kaasoo marka la soo gaabiyo noqonaaya AVRR.
NIdaamka iskaa u noqoshada waxaa ka mas’uul ah Waaxda socdaalka ama imaagareeshinka (Migri) iyo xerada qaxootiga ee dib u laabtuhu uu ka diiwaangashan yahay. Saaxiibka ugu muhiimsan ee Waaxda socdaalku ay arrimaha iskaa u noqoshada ka wada shaqeeyaan waa ururka caalamiga ah ee ka tirsan qaramada midoobay, ee qaabilsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah IOM (International Organization for Migration). Marka laga hadlaayo arrimaha dib u laabshada waxaa Waaxda socdaalku ay leedahay ururro dhowr ah oo adeeg bixiyayaal ah, kuwaaso isugu jira caalami iyo kuwo degaan ahaaneedba, waxaana iyadoo ururadaas kaashanaysa ay Waaxda socdaalku hubinaysaa , in dib u noqoshadu ay u socoto sida ugu wanaagsan ee suurtgalka ay u tahay.
Dib U Noqoshadu Waxaa Ay Suurtagalinaysaa Bilow Cusub Iyo Nolosha Oo Sii Socota
Caawimaadda iskaa u noqoshada ma ahan arrin cusub. Dalkan Finland waxaa caawimaadda iskaa u noqoshada ah laga qabanqaabinayay laga soo bilaabo tan iyo sannadkii 1998-dii. Kadib iyadoo sharciga la adeegsanayo ayaa iskaa u noqoshada waxaa laga dhigay qayb ka mid ah howlaha joogtada ah ee xeryaha qaxootigu ay qabtaan, waxaana uu sharcigaasu dhaqan galay 1.7.2015. Sannadihii la soo dhaafay tirada dadka iskood u noqonaaya aad bay u korodhay dalkaan Finland gudihiisa iyo dalalka kale uu yurubta. Halkii ay sannadkii 2014 ka ahayd tirada dalka iskood uga noqday dalkaan Finland 318, waxaa sannadkii 2016 ay noqotay tirada dadka la siiyay caawimaadda ee si iskood ah ugu laabtay dalkoodii hooyo 2 116 qof. Sannadkii 2017 waxaa fursaddaas ka faa’iidaystay oo dib u laabtay 1 425 qof.
Sannadihii la soo dhaafay ee ugu dambeeyay tirada dadka ugu badan waxaa ay ku laabteen dalka Ciraaq, sababta guud ee dib u noqoshaduna waxaa ay ahayd go’aanka maganagalyo doonista ee diidmada ah. Markii dhinac walba laga eego iskaa u noqoshadu waa mid u wanaagsan qofka la siiyay go’aanka diidmada ah, taasoo ah beddal ka wanaagsan marka ay howlwadeennada dawladdu qofka si khasab ah dalka uga saarayaan.
Qaar ka mid ah dadka yimid dalkaan Finland iyaga ayaa nafsad ahaantooda go’aan ka gaara in ay joojiyaan ama kansalaan howlhii u socday ee codsiga magangalyo doonista iyo sharci helistaba, tusaale ahaan sababta ay sidaas u yeeleen waa xubnihii qoyskooda ee jira dalkoodii hooyo awgood ama xaaladda dalkiisa oo isbedeshay awgeed. Tiro aad u badan oo ah dadkii helay go’aanka diidmada sharciga deganaanshaha waxaa ay dalkaan Finland kaga baxeen oo iskood ugu noqdeen hanti ay iyagu leeyihiin, iyadoon la siinin wax caawimaad ah. Si kastaba tirakoobka dadkaas ku saabsan waa mid aan wax sax ah laga hayn oo kala dhiman, waayo qaar badan oo ka mid ah dib u noqoshadooda cidna uma sheegaan.
Iskaa u noqoshada la isku caawiyo waa mid faa’iidooyin muuqda u leh bulshada. Waxaa ay ka qaybqaadanaysaa sidii uu qofku dib ula qabsan lahaa dalkiisa, sidoo kale waxaa ay caawinaad ka gaysanaysaa horumarka iyo isu dheelitiranka nolosha dib u laabtaha. Intaa waxaa dheer in iskaa u noqoshadu ay yaranayso joogitaankii uu qofka la siiyay go’aanka diidmada ee sharciga deganaanshaha uu iska joogi lahaa xerada qaxootiga, isagoo aan wax sharciga deganaashaha ah haysan.
Qofka Si Iskiis Ah U Noqonaaya Waxaa Uu Helayaa Caawimaad
Taageerada dhaqaale ee iskaa u noqoshada waa mid ku salaysan ka baaraandegis. Waa mid loogu talagalay codsadayaasha badbaadada caalamiga ah ama dadka la siiyay go’aanka diidmada ah ee magangalyodoonayaasha ah, kuwaaso doonaya in ay si iskood ah ugu noqdaan dalkii ay ka yimaadeen, ujeedadooduna ay tahay in ay dalkooda si joogto ah ugu noolaadaan.
Macaamiisha xerada qaxootiga waxaa ay taageerada dhaqaale ee iskaa u noqshada si madaxbannaan uga dalban karaan xeradooda qaxootiga ee ay ka diiwaan gashan yihiin. Haddii qofka dib u laabtaha ah uusan ka diiwaangashanayn xero qaxooti, waxaa codsiga taageerada dhaqaale siin karta Waaxda socdaalka (imaagareeshinka).
Taageerada Loogu Talagalay Qofka Iskiis U Noqonaaya Waa Lacag Ama Adeegyo Kale
Qofka dib ugu laabaanayaa dalkii u ka yimid waxaa uu heli karaa lacag, ama caawimaad waxtar kale ah oo aan lacag ahayn (hyödyketukea), ama labada waa la isku siin karaa. Nidaamka dib u laabshada waxaa had iyo goor tixgelin gaar ah la siiyaa baahida iyo xaaladda shakhsi ahaaneed ee qof walbaa u goonida ah. Qofka xaaladdiisu ay adag tahay waxaa la siin karaa taageerada dhaqaale ee la kordhiyay. Taageerada dhaqaale ee iskaa u noqoshadu waa mid qofka ka caawinaysa sidii uu nolol cusub mar kale uga bilaabi lahaa dalkiisa hooyo.
Cadadka lacagta taageerada dhaqaale ee iskaa u noqshada waxaa ay ku xiran tahay, hadba sida ay tahay xaaladda qofka laabanaaya iyo tan dalka uu ku laabanaayaba. Dadka waawayn ee si iskood ugu noqonaaya dalkoodii hooyo waxaa taageero dhaqaale oo lacag caddaan ahaan la siin karaa ugu badnaan 1500 yuuro, ilmaha aan wali qaangaarin ee qoyskiisa la laabanaayana waxaa la siin karaa 750 yuuro. Lacagta taageerada dhaqaale ee la kordhiyay ee caddaanka ama kaashka ahna waa 2000 yuuro. Waxaana arrinkaas lagu heli karaa tusaale ahaan sababo la xiriira naafanimada ama xanuun. Sannadkii 2017-kii inta ugu badan ee dadka dib u laabtay waxaa la siiyay taageero dhaqaale oo lacag ahaan ah inta u dhexeysa 800-1000 yuro.
Caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn (hyödyketukea), waxaa ay noqon kartaa qalab ama adeegyo kale. Dib u laabtaha waxaa uu heli karaa tusaale ahaan guri in loo raadsho ama ijaarka laga bixiyo, waxbarasho in la geeyo, in loo raadsho adeegyada daryeelka caafimaadka, shaqo in la geeyo ama in uu asaasto shirkad yar oo isaga u gaar ah. Qofka dib u laabtaha ah isaga ayaa go’aan ka gaaraya sida uu u isticmaalaayo caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn ee uu helay. Waxyaabaha loo arko in ay yihiin howlaha sharcidarrada ah, kuwaas wax caawimaad ah la iskuma siinaayo.
Qofka weyn ee si iskiis ah u noqonaaya waxaa caawimaadda waxtarka kale ahaanta ah (hyödyketukea) loo siin karaa ugu badnaan 5000 yuuro. Ilmaha la laabanaaya qoyskiisa waxaa caawimaadda waxtarka kale ahaanta ah loo siin karaa ugu badnaan 1500 yuuro.
Nidaamka Iskaa U Noqoshada
Diyaarinta howsha iskaa u noqoshada waxaa markii codsiga arrinkaas la dhigo kadib ay qaadataa muddo laba toddobaad gudahood ah. Waxaa qofka dib u laabanaaya laga bixinayaa tigidkii diyaaradda ee uu dalkiisa ku aadi lahaa, haddii aanu qofka dib u laabtaha ah haysan baasaboor, waxaa lagu caawinayaa sidii uu heli lahaa dukuminti uu ku safro. Qofka dib u laabtaha ah wuxuu u safarayaa sida caadiga ee qof walba oo musaafir ah uu u safro, iyadoon aanay cid kaxaynaysaa la socon, wuxuuna sida dadka kale ee musaafiriinta ah mari doonaa wadooyinka safarka ee caadiga ah.
Hay’adda IOM ayaa qaadanaysa xilka ah qabanqaabinta safarka, waxaa ay qofka dib u laabtaha ah ka caawinaysaa arrimaha garoonka diyaaradda iyo xilliga safarka dib u noqoshada, sidoo kale waxaa ay u fidinaysaa taageerooyin kala duwan marka uu dib u noqdo kadib. Dadka waayeelka ah, kuwa xanuunsan, qoysaska iyo carruurta kaligood ah iyo haweenkaba, waxaa haddii ay u baahdaan xilliga safarka ay heli karaan adeegyo gaar ah.
Qofka dib u laabtaha ah ee la siiyay taageero dhaqaale oo lacag ah, waxaa marka uu laabto uu la xiriirayaa xafiis goboleedka IOM ee ku yaalla dalkiisa, ama meeshii kale ee la islagartay ee adeeg bixiyaha ah, kuwaasoo qaabilsan wax ka qabashada bixinta lacagta kaashka ama caddaanka ah iyo caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki). Taageerada dhaqaale bixinteeda waxaa lagu wareejin karaa akoonka, kaash ama gacanta oo laga siiyo iyo jeeg ahaan, taasoo ku xiran hadba xaaladda uu yahay dalka uu qofku ku laabtay. Helitaanka taageerada dib u noqoshada waxaa ay qaadataa inta badan dhowr todobaad, iyadoo ayna ku xiran tahay hadba qaabka loo qabanqaabiyay.
Qalabka caawimaadda waxtarka kale e aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waxaa uu qofku ka qaadan karaa xafiis goboleedka IOM:ta ee ku yaalla dalka uu ku laabtay, ama meelaha kale ee adeeg bixiyayaasha ah ee Waaxda socdaalku ay dooratay. Qofka dib u laabtaha ah haddii uu doonaayo, waxaa uu kahor inta uusan laaban wadaxaajood ka geli karaa arrinka ku saabsan waxyaabha loo isticmaalaayo caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waxaana kahor inta uusan ka bixin dalkaan Finland xerada qaxootiga laga siin doonaa, cinwaanka iyo halka uu kala xiriiri karo adeeg bixiyaha laga helaayo caawimaadda waxtarka kale ah ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) ama wakiillada IOM-ta. Qofka dib u laabtaha ah iyo hay’adda adeeg bixintu, waxaa ay si wadajir ah u samayn doonaan qorshaha dib ula qabsiga wadanka, kaasoo qaadan kara inta u dhexeysa laba toddobaad illaa iyo dhowr bilood.
Haddii Aad Qaadatay Sharciga Deganaanshaha, Iskaa U Noqoshadu Waxaa Ay Noqonaysaa Dib U Guuris
Dalkaan Finland waxaa go’aannada magangalyodoonka gaaristooda ay ku salaysan yihiin sida ay dhigaayaan sharciga ururuka midowga yurub iyo heshiiyada caalamiga ah. Codsi kasta oo magangalyo doon waxaa loo falanqeeyaa oo loo baaraa si gaar ah. Waaxda socdaalku marka ay gaarayso go’aannada magangalyodoonka waxaa ay raacdaa sida uu dhigaayo sharciga shisheeyaha ama ajnabiga, kaasoo marka la gaaraayo tixgelin gaar ah la siinaayo xuquuqda ban’iaadamka, sharciga asaasiga ah iyo diidmada dib u celinta.
Rabitaanka ah kaliya in Finland la iska joogo, faqriga, dhibaatooyinka dhaqaale, da’da, xirfadda ama niyad u haynta aadka u sarraysa ee ah in la shaqeeyo, ma ahan kuwa ku filan in lagu helo qaxootinimo ama sharciga deganaashaha dalka. Sidoo kale lama siiyo sharciga deganaanshaha dalka ama badbaadada caalamiga ah ee sida uu dhigaayo sharciga ajaanibta, haddii xaaladaha ka jira dalka qofka codsadaha ah ay yihiin, kuwo aan sabab u noqon karin siinta magangalyo qaxootinimo. Waa arrin si aad ah xaqiiqda uga fog, in tusaale ahaan qof ka yimid wadamada xubnaha ka ah dalalka midowga yurub uu magangalyo qaxootinimo ka helo Finland, Sida ayba tahay caadada dalalka ku bahoobay ururuka midowga yurub, Finland waxaa ay dalalka midowga yurub oo dhan u yihiin kuwo ammaan ah.
Magangalyada qaxootinimo ama badbaadada caalamiga ah waxaa la siiyaa, qofka ay khatar shakhsiyadeed oo aad u adag ka soo waajahayso haddii uu ku laabto degaankii uu ku noolaa . Haddii uu qofku u qaxi karo meel ka mid ah gudaha dalkiisa, inta badan badbaadada caalamiga ah lama siiyo. Helitaanka darajada qaxootinimo waxaa shardi u ah, in qofku ay sababo jira awgood soo waajahi karaan cadaadisyo ku salaysan asalkiisa ama halka uu ka soo jeedo, diin, jinsiyad ama in lagu liidaayo koox gaar ah oo bulshada dhexdeeda oo uu ka tirsan yahay awgeed ama in fikirkiisa siyaasadeed awgiis loo dhibaataynaayo.
Waxyaabaha la raacaayo marka la bixinaayo maganagalyada qaxootinimo waxaa si cad oo faahfaahsan ay ugu qoran yihiin ulkomaalaislaki (sharciyada dadka ajaanibta ah) iyo sidoo kale heshiisyada caalamiga ah, kuwaasoo ay Finland ogolaatay.
Joogitaanka Finland Iyadoo Aan Wax Sharciga Deganaanshaha Ah La Haysan
Qofka magangalyodoonka ah dalkaan Finland gudihiisa wuu iska joogi karaa xilliga ay socoto falanqaynta codsigiisa magangalyodoonka ah oo dhan, isagoo aan haysan wax fiiso ama sharciga deganaaanshaha ah. Joogitaanku wuxuu isu bedelayaa mid sharcidarro ah, markii uu qofka maganagalyodoonka ah iska sii joogo dalka, iyadoo la siiyay go’aanka diidmada ee magangalyo doonista qaxootinimo.
Sharciga deganaashaha waa mid aad muhiim u ah dalkaan Finland gudaheeda, marka laga hadlaayo dhinacyada xuquuqda iyo gunnooyinka dhaqaale. Haddii aanu qofku lahayn sharciga deganaanshaha dalka, wax shaqo ah lama gayn karo, lamana siin karo lacagta taageerada shaqo la’aanta. Waxaana arrinkaan uu sababi karaa, in dadka aan xuquuda u lahayn in ay si sharci ah ku joogaan dalka, ay khatar weyn ugu jiraan in ay takoormaan, u leexdaan dhanka falal dambiyeedka ama ay ku dhacaan ka ganacsiga dadka, ama kooxaha dambiyada sameeya ay isticmaalaan. Sababtaas awgeed ayaa iskaa u noqoshadu waxaa ay qofka aan haysan magangalyada qaxootinimo ama sharciga deganaanshaha dalka, ay ugu tahay xalka ugu wanaagsan.
Haddii qofku uu soo buuxin waayo shuruudihii lagu helaayay sharciga deganaanshaha dalka, uuna diido in uu si iskiis ah dib ugu noqdo dalkiisii, arrinka ku saabsan ka saarista dalka waxaa loo gudbinayaa booliska. Boolsika ayaa codsadaha ku wargelin doona diyaarinta dib u celinta. Xitaa markii la gaaro xaaladahaas, waxaa qofka marka ugu horraysa la siinayaa fursadda ah in uu si iskiis ah dib ugu laabto, kahor inta aan waddanka laga saarin oo dib loogu celin dalkiisii.
Caawimaad ayaa lagugu siinaayaa haddii aad si iskaa ah dib ugu laabaneyso dalkaagii